Momba anay - Hebei Gorgeous Bike Co., Ltd.
Kalitaon'ny kilasy voalohany, fitantanana kilasy voalohany ary serivisy voalohany
Ny ozinina bisikileta tsara tarehy dia velarana 10.000 metatra toradroa.
Hebei Gorgeous Bike Co., Ltd. dia orinasa iray manokana amin'ny famokarana sy fanodinana bisikileta ho an'ny ankizy, bisikileta fandanjalanjana, scooter, fiara swing ary karazana kojakoja bisikileta isan-karazany. Manana ekipa fitantanana kalitao avo lenta izahay ary ekipa R&D matihanina miaraka amin'ny fampahalalana haingana, Orinasa mpamokatra maoderina izay manome sy rafitra fitantanana mpanjifa malina. MANANA FAFITRERETO ANTSIKA manokana momba ny kitapo sy ny fantsom-batana ary ny fivorian'ny fivorian'ny bisikileta feno. Any Xingtai City, faritanin'i Hebei no misy ilay orinasa. Ny tontolon'ny jeografia ambonimbony sy ny toe-javatra mety amin'ny fivezivezena dia ahafahan'ny orinasa miditra haingana amin'ny tsena manerantany ary lasa iray amin'ireo mpamokatra bisikileta lehibe indrindra any Shina. sy serivisy.
Nanomboka tamin'ny taona 2020, nanangana sampana fanondranana varotra ivelany izahay hamorona tsena any ivelany miaraka amin'ny serivisy avo lenta sy vokatra avo lenta. Mandritra izany fotoana izany, manohy manatsara ny fahombiazan'ny famokarana izahay ary mampivelatra ireo vokatra tany am-boalohany izay mifanaraka amin'ny filan'izao tontolo izao. Manaraka ny fiarahan'ny "mivelona amin'ny kalitao, ny fampandrosoana amin'ny serivisy" ary mijery ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny fitantanana manavao ny maha-hery mitaona ny fampandrosoana ny orinasa, ary mandroso hatrany amin'ny làlan'ny "kalitaon'ny kilasy voalohany, fitantanana kilasy voalohany ary serivisy kilasy voalohany. "MITADIAVA HATRANY fifandraisana lava be isaky ny hafa isika. Ny fifandraisana misy eto amintsika dia ho lasa PROFESSINAL bebe kokoa, hisokatra ary mahomby. GORGEOUS, NY mpiara-miasa aminao azo atokisana any Chine amin'ny famoahana ny tsipika fanodinkodinana sy ny hafa.